4 qof oo ka tirsan bulshada riyid-ka ah ee ku nool magaalada Dhuusomareeb ayaa ku dhaawac-may dagaal saacado qaatay oo galabta ka qarxay dagmada Dhuuso-mareeb ee xarunta gobolka Gal-gaduud. – Radio Daljir
4 qof oo ka tirsan bulshada riyid-ka ah ee ku nool magaalada Dhuusomareeb ayaa ku dhaawac-may dagaal saacado qaatay oo galabta ka qarxay dagmada Dhuuso-mareeb ee xarunta gobolka Gal-gaduud.
Dhuusomareeb, Nov, 25 ? Inta la bubo 4 ka mida bulshada rayid-ka ah ee ku dhaqan magaalada Dhuusomareeb ayaa ku dhaawacantay dagaal maantay degmadaasi ku dhexmaray ciidanka Ahlu-sunna iyo kooxda Al-shabaab.
Wararka laga helayo degmada Dhuusomareeb ee gobolka Gal-gaduud ayaa ku waramaya in dagaalka ay soo qaadeen kooxda Al-shabaab, kaddib markii ay weerar ku qaadeen dhinaca degmada Ceelbuur, dabadeedna ay u soo gud-been dhanka caasumada gobolka Gal-gaduud ee Dhuusomareeb. Sida uu radio Daljir u xaqiijiyay wariyaha radio ERGO ee gobolka Gal-gaduud C/Jamaal Macalin Axmed.
Dagaalka oo qaatay saacado qura ayaa waxaa dabadeed u suurto gashay ciidanka Ahlu-sunna ee gacanta ku haya gobolka Gal-gaduud inay xajistaan sidii uu gacantooda ugu sii jiri lahaa gobolku, balse Al-shabaab ayaa dabadeed isaga baxday deegaankaasi.
Maahan markii ugu horaysay oo kooxda Al-shabaab ay dagaal ku soo qaado degmada Dhuusomareeb, waxaana Al-shabaab ay muddo farobadan dagaalo ay degmadaasi ku soo qaaday ay kula wareegtay gacan ku haynta Dhuusomareeb, balse waxaa caado iyo dhaqan kooxdaasi u ah, waxyar un kaddib inay iskood isaga baxaan, kaddib markii ay gacanta ku dhigaan hub iyo dhaqaale wixii yaala deegaankaasi.